Dropbox mechara nye nkwado SD kaadị | Gam akporosis
Dropbox anaghị enwetakarị ọtụtụ mmelite, ọ dịkarịa ala kwa ọnwa, mana ee mgbe mmadụ rutere eweta akụkọ na-adọrọ mmasị dị ka nke anyị nwere taa.
Taa na-eweta ụdị ọhụrụ ike mbupụ faịlụ na kaadị SD, ihe dị mkpa iji nwee ike ịgafe onye ọ bụla ozugbo na kaadị mpụga na anyị na-eche ihe kpatara na arụbeghị ọrụ a tupu. Anyị na-atụ anya na ụfọdụ mmetụ ahụ na-ahụ anya ga-abata n'oge na-adịghị anya na interface dabere na usoro ihe eji emepụta ihe ọhụụ nke ga-adaba na gam akporo L maka izu ole na ole sochirinụ.
1 Export faịlụ na SD kaadị na Dropbox
2 Kedu ka m si ebupụ faịlụ na kaadị SD m?
3 Olee otú m ga-esi erite uru site na nke a?
4 Ozi ndị ọzọ na ụdị ọhụrụ nke Dropbox
Export faịlụ na SD kaadị na Dropbox
Ọ bụ ezie na Google na-ezube itinye kaadị SD n'akụkụ gam akporo smartphones na mbadamba, nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ nchekwa ọzọ na ngwaọrụ gị iji mee ihe nke ọma nke ike multimedia.
Site na ọkwa na mwepụta nke ikike mbupụ faịlụ na kaadị SD, Dropbox na-abanye n'otu ụgbọ ahụ dị ka ndị ọrụ -eme ka na ụma ebe nchekwa dị nnọọ mkpa maka gam akporo.
Kedu ka m si ebupụ faịlụ na kaadị SD m?
Na-eyi faịlụ site na Dropbox na kaadị SD ọ bụ nnọọ ihe dị mfe ọrụ.
Pịa bọtịnụ ahụ "Ndenye omume" n'akụkụ aka nri nke faịlụ ịchọrọ ịbupụ.
N'akụkụ aka nri ọzọ bụ ihe "Mbupụ". Pịa ya.
Na-ebili a mmapụta menu dị iche iche ị ga-ahọrọ nke mbụ "Chekwa na ngwaọrụ"
Anyị na-aga na ihuenyo ọzọ ebe ị ga-ahụ na akụkụ menu n'akụkụ ma dị n'ime yana ebe nchekwa dị na mpụga
Select họrọ ihe D na naanị ihe bụ họrọ nchekwa ebe ị chọrọ ịzọpụta faịlụ ka mbupụ
Olee otú m ga-esi erite uru site na nke a?
Ọ bụghị mmadụ niile nwere nnukwu nchekwa na igwe ojii Dropbox, ma ọ nwere ike ime na njicha ndị a na-akpaghị aka na ekwentị anyị enweghịzi ohere ịchekwaa ha.
Yabụ ọ nwere ike ịdịrị anyị mma ịkwaga ha niile na kaadị SD ịtọhapụ oghere Dropbox ma chekwaa onwe gi. E wezụga eziokwu na ọ bụrụ na ị nwere chaja kaadị ebe nchekwa, ịnwere ike ịnyefe faịlụ na SD ka ị were ha na kọmputa gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgafe ndabere a.
Ozi ndị ọzọ na ụdị ọhụrụ nke Dropbox
Ewezuga ihe ọhụụ nke mbupụ faịlụ na SD pụtara, ụdị ọhụrụ a họtara ọchụchọ ngwa ngwa na nkwado gam akporo L. A na-anabata ihe ọchụchọ ebe ọ bụ na oge ụfọdụ ọ na-abụ ọrụ dị nwayọ nwayọ iji chọọ faịlụ ụfọdụ na igwe ojii anyị na Dropbox.
Gam akporo L nkwado bụ na-akwadebe maka mgbanwe ndị ọzọ nke ahụ ga-abata banyere ụdị gam akporo ọhụrụ a nke na-aga ịda.
Dropbox: igwe ojii na nchekwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Dropbox emelitere na nkwado iji bupụ faịlụ na kaadị SD, nkwado maka gam akporo L na ndị ọzọ
Ọ bụrụ na ị gbanye mgbọrọgwụ Sony Xperia Z3 gị, ịnwere ike ịnwe nsogbu na igwefoto